ကိုကိုကြီး(၈၈) မျိုးဆက် သို. ABSDF မြောက်ပိုင်းရဲဘော်ဟောင်း ညီညီ မှ တုန်.ပြန် စာ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« John Hopkins is going to upgrade RASU to Yangon National University
Prof’s secret film on Burma, now they called Myanmar »
ကျနော်ရေးတဲ့ အခန်းဆက်တွေကို စောင့်ဖတ်ကြည့်ပါ။ အစအဆုံးပြီးသွားရင် ဒါမှမဟုတ် မပြီးခင်မှာတောင်ဇာတ်ရည်လည်သွားပါမယ်။
အောင်နိုင်က အထက်ဗမာပြည်မှာ ထွန်းအောင်ကျော်က ထောက်လှမ်းရေးတာဝန်ခံ၊ အောက်ဗမာပြည်မှာ ကိုကိုကြီးက ထောက်လှမ်းရေးတာဝန်ခံ ၊ နိုင်အောင်ကလည်း မိုးသီးဇွန် လဲထောက်လှမ်းရေး မဟုတ်လား ဆိုပြီး စွတ်စွဲတာ ကျနော်တို.အဖမ်းခံရသူတွေအားလုံးအသိပါ။
ခင်ဗျာ: မတော်လို.များ မြောက်ပိုင်းမှာတောခိုခဲ့ရင် ခင်ဗျာ: ၊ မောင်မောင်ကြွယ် နဲ. ထွန်းအောင်ကျော်တို. အမှုတွဲဖြစ်ပြီး ၁၅ ယောက်စာရင်းမှာ ခင်ဗျားပါ ပါသွားခဲ့မှာ။
အခု ၁၅ ယောက်ထဲပါတဲ့ ကိုချိုကြီးဆိုရင်လဲ ကျနော်ရယ် သူရယ် GOSDA အမတ် ကိုမောင်မောင်အောင်ရယ် ၃ ယောက် မန္တလေး သံဃသမ္မဂ္ဂီ ဥက္ကဌ ဆရာတော် ဦးရေဝတ လွှတ်လို.မဲပေးပြီးနောက်ရက်ကစပြီး နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပုံစံသစ်ဖော်ဖို. အနိုင်ရမဲ့ ပါတီနဲ.ညှီနှိုင်းဖို. ဆွေးနွေးရန်အတွက်ခင်ဗျာနဲ.တောင်ဥက္ကလာပမှာ တွေ.ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သူပါ။
နောက်ပြီးခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံး ၊ နေရာတကာမှာ လူတကာက ကိုယ်မခံရတဲ့ကိစ္စတွေကို ကြားထဲကနေ ဝင်ဝင်ပြီးခွင့်လွတ်နေကြတာ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာ အစဉ်အလာဆိုးကြီး ချန်ထား ကြမလို.လား ။
လုပ်ချင်ရာလုပ်ကြ နောက်ကြခွင့်လွတ်ကြမှာပဲ ဆိုတဲ့အသိတရား ကိုနောင်မျိုးဆက်အတွက် ချန်ထားခဲ့ချင်ကြသလားး
မမှားကြပါနဲ. သတိထားပြီးလုပ်ကြပါ။ကိုယ်မှားရင်ကိုယ်ပြန်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အသိတရားမျိုး ထားခဲ့ဖို.ကြီုးစားပါ။
ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကပြောဖို.လွယ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်သူများတွေခံရတဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ.။ ကျနော်တို.က ကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့ကိစ္စတွေကိုလဲ ခွင့်လွတ်ပါတယ် ဆိုရင်တော့ အဲဒီလိုလူမျိုးတွေရဲ. အမြော်အမြင်နည်းပါးမှုကို ရှုတ်ချပြီး မေတ္တာဓါတ်ကြီးမားမှုကိုတော့ ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
တဆက်ထဲမှာပဲ ၁၂ ရက်နေ.အမှတ်တရပွဲ ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကျနော်တို.နဲ.အတူ အချုပ်ခံရပြီးလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်က ပုဂ္ဂိုလ်များကို တခုမေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။
နောင်ကို ကိုချိုကြီးနာမည်ကိုအသုံးပြုရင် လူသစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးကြပါနဲ.။
ကိုချိုကြီးတို. ကျနော်တို.တတွေ UG လုပ်ခဲ့ကြတာဟာ မန္တလေးကျောင်းသားအုပ်စုတွေရဲ.အားပေးကူညီပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ.အတူ ABSDF ကိုမိခင်အဖွဲ.ဆိုပြီးလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။
၁၉၉၀ နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ မခင်ချိုဦးနဲ. နန်းအောင်ထွေးကြည်ကို ထောက်လှမ်းရေး ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းထောက်ခံပေးပါဆိုတဲ့စာကျနော်တို.ဆီကို မြောက်ပိုင်းဗဟိုကနေ ရောက်လာပါတယ်။
ကျနော်တို.တတွေက ဆရာတော် ဦးရေဝတ နဲ.တိုင်ပင်ပြီး ထောက်လှမ်းရေးလို.မသင်္ကာံ ဘူးဆိုရင် မြို.ပေါ်ပြန်ပို.လိုက်ပါ။ ဆက်ပြီးသတ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်နေမယ်တိုရင် မန္တလေးအုပ်စုက NB နဲ.အဆက်အသွယ်ဖြတ်မယ်လို.စာပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ ကိုချိုကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ အများကြီးထဲကတခုပါ။ခင်ဗျားတို.တတွေလဲသိသင့်သလောက် သိခဲ့ကြမှာပါ။ အဲဒီတော့ပြော ချင်တာကနောက်နောင်ကို ကိုချိုကြီးနာမည်ကိုအသုံးပြု ( ဖို.များ ကြုံကောင်း ကြုံလာခဲ့ရင်) ကိုချိုကြီးကိုလူသစ်လို.မသုံးကြပါနဲ.လို.မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
Tags: All Burma Students' Democratic Front, Non-governmental organization
This entry was posted on March 14, 2012 at 1:51 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
27 Responses to “ကိုကိုကြီး(၈၈) မျိုးဆက် သို. ABSDF မြောက်ပိုင်းရဲဘော်ဟောင်း ညီညီ မှ တုန်.ပြန် စာ”
March 17, 2012 at 4:02 am | Reply
ABSDF အဖွဲ့ဝင်များနှင့်မေးမြန်းချက် @ http://8-8-88.blogspot.com/2012/03/absdf_09.html#more
၁၉၉၀ ​ဝန်းကျင်အတွင်း ​ABSDF ​ကျောင်းသားတပ်မတော် ​(မြောက်ပိုင်း) ​ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ ​လူသတ် မူတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ​အကြောင်းတွေ ​ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာ၊ ​ဘလော့စာမျက်နှာ ​အစရှိတဲ့ ​အင်တာနက်စာ မျက်နှာမှာ ​ပွက်လောရိုက်နေပြီး ​စွပ်စွဲမူတွေ ​အပြန်အလှန်ငြင်းခုံ နေကြတာကိုလည်း ​မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ ​ပြီးတော့ ​ဒီ ရက်ပိုင်းအတွင်း ​ABSDF ​ကနေ ​အဖြစ်မှန်ပေါ်ပေါက်ရေးကော်မတီကို ​ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီး ​ဖွဲ့စည်း ရခြင်းရဲ့ ​ရည်ရွယ်ချက်တွေ ​ဘယ်သူတွေပါဝင်သလဲဆိုတာတွေ ​သိရအောင် ​ကိုမြတ်မင်းက ​ABSDF ​အဖွဲ့ ဝင်တွေနဲ့ ​ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာတွေကို ​နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ မြန်မာ့လူအဖွဲ့ အစည်းမှာ တာဝန်ခံမှုတွေ၊တာဝန်ရှိမှု အလေ အ တ တွေ ပေါ်စေချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ လူ့ အဖွဲ့အစည်းမှာဒီလိုမျိုး အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်နေကြတာ ကျနော်တို့အားလုံး အသိပါပဲ။ တာဝန်ခံမှုတွေက တစုံတရာအားနည်းနေတာ ကို ကျနော်တို့ တွေ့ နေရပါ တယ်။ အဲဒီလို မျိုးတာဝန်ခံမှု၊ တာဝန် ရှိ မှုအလေ့ အထတွေကို မြန်မာ့လူ့ အဖွဲ့ အစည်းမှာပေါ်စေ ချင်ပါ တယ်။ABSDFကဒီကိစ္စအတွက်ကျနော်တို့ က ရှေ့ ဦးဆောင် လုပ်ပြ တဲ့ သဘောမျိုးလည်းပါပါတယ်ခင်ဗျ……
March 17, 2012 at 4:03 am | Reply
CONTINUED: မေး။ ။အချက်အလက်ကောက်ခံတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ တွေ့ နိုင်တယ်လို့ ကြိုတင်တွက်ဆ မှုတွေ ရှိပါသလဲ။
ABSDF အဖွဲ့ဝင်များနှင့်မေးမြန်းချက်(အသံဖိုင်) @ http://www.radioaustralia.net.au/burmese/radio/onairhighlights/423002
March 17, 2012 at 4:08 am | Reply
ညီညီ-မန္တလေး @ http://8-8-88.blogspot.com/2012/03/blog-post_8720.html
…..မတ်လဆန်းမှာ ၀န်ကြီးဦးဝင်းကို တရုပ် ပြည်ခွေးမှင်(ကူမင်း) ကတဆင့်အမေရိကန်ကိုပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူဟာ အမေရိကန်မပြောနဲ. ကူမင်းမြို. တော်တောင်မရောက်ခဲ့ပါဘူး။လမ်းခုလတ် တရုပ်ပြည် မန်ရှီမြို.ကသူတည်းခိုတဲ့ဟိုတယ်အခန်းထဲမှာဓါးထိုးလုပ်ကြံခံခဲ့ရပါတယ်။၀န်ကြီးရဲ.အပြန်ခရီးကိုတာဝန် ခံပို.ဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာ ABSDF (NB) ကွန်မန်ဒို တပ်က ဖြစ်ပါတယ်….
CONTINUED: ဦးဝင်း ကိုကအကူအညီတောင်းလို.အဝေးရောက်အစိုးရအဖွဲ.က ကုလသမဂ္ဂမှာတင်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာတန်း ကိုမြန် မာလို ဘာသာပြန်ပေးခဲ့ပြီး ကျောင်းသားတပ်နဲ.KIAတပ်ထဲကိုလဲဖြန်.ချီခဲ့ပါတယ်။အဲဒီရုံး ကိုကြိမ်ဖန်များစွာ သွားရောက်ခဲ့ရာမှာ အဲဒီမှာရှိတဲ့အရွေးချယ်ခံအမတ် ဦးကြာမြနဲ.ဒု-ဥက္ကဌ ဦးတင်အောင်တို. ဟာကျနော် ကိုမလိုလားကြောင်းကိုယ်နှုတ်အမူအရာနဲ.အကြီမ်ကြီမ်ပြခဲ့ကြပြီး၊ကျနော် နဲ.တကြီမ်မှစကားမပြောခဲ့ကြ ပါဘူး။မိုးညင်းမြို.နယ်NLDစည်းရုံးရေးမှုးဦးကျော်မြကတော့သူသိသမျှကို ၀င်ရောက်ပြောဆိုပြီးကျောင်း သား တပ်ရဲ.လွဲမှားမှုတွေကိုထောက်ခံဆွေးနွေးလေ့ရှိပါတယ်။ မတ်လဆန်း မှာ ၀န်ကြီးဦးဝင်းကို တရုပ် ပြည်ခွေးမှင်(ကူမင်း) ကတဆင့်အမေရိကန်ကိုပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာ အမေရိကန်မပြောနဲ. ကူမင်းမြို. တော်တောင်မရောက်ခဲ့ပါဘူး။လမ်းခုလတ် တရုပ်ပြည် မန်ရှီမြို.ကသူတည်းခိုတဲ့ဟိုတယ်အခန်း ထဲမှာဓါး ထိုးလုပ်ကြံခံခဲ့ရပါတယ်။၀န်ကြီးရဲ.အပြန်ခရီးကိုတာဝန်ခံ ပို.ဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာABSDF(NB)ကွန်မန်ဒို တပ်က ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တရက်ခြားမှာ ABSDF(NB) ကစစ်ရေးတာဝန်ခံသံချောင်း၊၀ါဒဖြန်.ချီရေးက အရာခံဗိုလ်စိန်သန်း၊တပ်ကြပ်ကြီးစောမြအောင်နဲ.ထောက် လှမ်းရေးကရဲဘော်သက်လင်း တို.၄ ယောက် KIAကကျနော်နေ တဲ့ဗိုလ်ကြီး လိုင်စမ်းG3ရဲ. အီမ်ကိုရောက်လာပြီးကျနော်ကို ABSDF ကိုပြန်ခေါ်ဖို. ဆိုပြီး ဒေါသတကြီးနဲ.ရောက် လာပါတယ်။ဗိုလ်ကြီးလိုင်စမ်းကပြန်မထဲ့ပေးသေးပဲKIAရဲ.စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မိုင်ကိုသွားတင်ပြပါ တယ်။ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မိုင်ရဲ.အမိန်.နဲ.ကျနော်ကိုသံချောင်းပြန်ခေါ်ခွင့်မရပါဘူး နောက်တခါ ကျနော်ကို ချက် ချင်း KIA အဖွဲ.၀င်အဖြစ်ကျမ်းသစ္စာကြီမ်ဆိုခိုင်းပြီးစာရင်းသွင်းမှာဖြစ် လို.နောက်နောင်ကျနော်ရဲ. လုံခြုံရေး ကိုမထိပါးဖို.သံချောင်းကိုအမိန်.ပေးလိုက်ပါတယ်။ သံချောင်းကဗိုလ်ချုပ် အီမ်ကပြန်ဆင်း လာပြီး“မင်းကံကောင်းသွားတယ်မှတ်၊မင်းအတွက်ငါကျင်းတူးခဲ့ခိုင်းခဲ့ပြီးပြီ၊မင်းတပ်ပြန်မရောက်ဖူး လမ်း တင် ရှင်းပြစ်ခဲ့မလို. ၊အေးကွာနောက်တော့တွေ. တာပေါ.” လို.မချင့်မရဲနဲ.ကြီမ်းဝါး သွားခဲ့ပါတယ်။
March 17, 2012 at 4:10 am | Reply
အဲဒီနောက်မှာကျနော်.ကို KIA ရဲ.စစ်ရုံးချုပ်ထောက်လှန်းရေးဌါနတာဝန်ခံ စစ်ဦးစီးချုပ် ပထမတန်း ဗိုလ်မှုးကြီးပန်းအောင်ရဲ.ကိုယ်ရေးအရာရှိအဖြစ်ခန်.လိုက်ပါတယ်။ ၅ ရက်လောက်အကြာ ရင်ကျန်းမြို.ကို ဗိုလ်မှုးကြီးပန်းအောင်နဲ.အသွားမှာ ဗိုလ်မှုးကြီးနဲ.ကျနော်တို.တည်းနေတဲ့တည်းခိုခန်းကို NLD (LA) က ဦးကျော်မြအရေးတကြီးလာရှာသွားတယ်လို.ကြားရတယ်။သူတည်းတဲ့ ဝိုင်မော် တည်းခိုခန်းကို လိုက်သွား တဲ့အခါ ဦးကျော်မြက သူ.မိန်းမရဲ.တူအရင်းဘာအပြစ်မှမရှိပဲ ကျောင်းသားတပ်မှာအ သတ်ခံရတဲ့အကြောင်း ကိုဗိုလ်မှုးကြီးပန်းအောင်ကိုငိုပြီးတိုင်တန်းပါတယ်။”ဘာ-ဒီကောင်တွေ သတ်ကြပြန်ပြီးလား?”လို.ပြောပြီးအဲဒီပြောဆိုဆွေးနွေးဖို.တပ်ကိုချက်ချင်းပြန်သွားပါတယ်။ တရက်မှာ NLD (LA) လွတ်မြောက် နယ်မြေ ကလူတယောက် KIA စစ်ရုံးချုပ်ကိုရောက်လာပြီး ဦးကျော်မြပျောက်နေလို.စုံစမ်းပေးဖို.အမှု.လာတိုင် ပါတယ်။ စစ်ရုံးချုပ်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုချက် ချင်းစတင်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးစဉ်ကာလအတွင်း NLD (LA) ရုံးကလူတွေဘယ်သူမှအပြင်မထွက်ရအမိန်.ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်အရ ဦးကျော်မြကို NLD (LA) ရုံးမှ ရုံးအကူ ဦးသာမြ(နမ္မတီး)နဲ.အခြားတယောက် (နာမည်မမှတ်မိ)တို.ကသတ်တာဖြစ်ကြောင်းနှင့် အလောင်းကို NLD (LA) ရုံးအတွင်းထမင်းစားဆောင်ရဲ.မြေစိုက်ထမင်းစားပွဲခုံရဲ.အောက်မှာ တူးမြုပ်ထား တာကိုတွေ.ရပါတယ်။ဒီ ဦးကျော်မြရဲ.တူရော၊ဦးကျော်မြရော အသတ်ခံရတာက ဦးကျော်မြရဲ.ကျောင်းသား တပ်မတော်အပေါ်ဝေဖန်မှု၊ဝန်ကြီး ဦးဝင်းကိုအသတ်ခံရတာကို တရားဝင်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို. NLD-LA ကိုတောင်းဆိုခဲ့လို.ဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်မြကိုသတ်တဲ့ လူသတ်တရားခံ ၂ ဦးကို NLD-LA တာဝန်ရှိသူတွေဖြစ် တဲ့ ဒု-ဥက္ကဌ ဦးတင်အောင်နဲ.အရွေး ချယ်ခံအမတ် ဦးကြာမြတို.က အဓိကတာဝာန်ရှိသူ ကိုအလုပ်ကြမ်း နဲ.ထောင်ဒဏ် ၁၈ နှစ်၊ အားပေးကူညီသူကို အလုပ်ကြမ်းနဲ.ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်ချလိုက်ပါတယ်။ လွတ်မြောက် နယ်မြေမှာပဲချုပ်ထားပြီး အလုပ်ကြမ်းခိုင်းစေပါတယ်။နောက်သုံးလ လောက်အကြာမှာအဲဒီပြစ်ဒဏ်ကျကျဉ်း သားနှစ်ယောက်စလုံးကို ဦးတင်အောင်နဲ. ဦးကြာမြတို.ကအထွေထွေလွတ်ငြီမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးပြီးပြစ် ဒဏ်ကနေကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီလွတ်ငြီမ်းချမ်းသာခွင့်ရသူနှစ်ဦးဟာ သူတို. ကိုပြစ်ဒဏ် ချခဲ့ပြီး၊လွတ်ငြီမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့တဲ့သူနှစ်ဦးနဲ.အတူNLD-LAရုံးအတွင်းပြန်နေပြီးအရင်လိုပဲအလုပ်တွေ ကိုပြန် တွဲလုပ်နေပြန်ပါတယ်။
March 17, 2012 at 4:16 am | Reply
….နောက်တခါ မဒမ်သံခဲ ကလဲမန္တလေးမှာအလင်းဝင်ပြီးရောက်လာချိန် မှာ“ဒီမှာကိုညီညီ ဒီသတ်ဖြတ် မှုတွေမှာ CS သံချောင်းမှားခဲ့တယ် ဆို ရင်တောင်စေတနာအမှားပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး အဲဒီတုန်း ကမန္တလေး တရုပ်တန်းဈေးကကျနော့်မိန်းမဆိုင်ရှေ့ မှာ အော်ပြောတော့ကျနော်တောင် ဆဲလွှတ် လိုက်သေးတယ်။
အဲဒီ မဒမ်သံခဲကပဲ ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကို ကျမ ကိုယ်တိုင်ခေါင်းဖြတ် ပါရစေ လို့ သံချောင်း အိမ်ကို တက်ပြီးတောင်းဆိုတယ်ဆိုတာ အားလုံးပြောနေတဲ့ကိစ္စပါ…
ကိုသံချောင်းတော့ဘာမှ ခုခံချေပခွင့်မရပဲ အနှိပ်စက်ခံရတော့မှာပဲဆိုတဲ့ဂရုဏာတရား ထားနိုင် တဲ့သူက ကိုထွန်းအောင်ကျော် တို.၊ကိုချိုကြီးတို.ဘာမှခုခံ ချေပခွင့်မရပဲအသက်ခံခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ ဂရုဏာမျိုး မထား နိုင်ရတာလဲ လို.မေးချင် ပါတယ်။။
နောက်တခါ မဒမ်သံခဲ ကလဲမန္တလေးမှာအလင်းဝင်ပြီး ရောက်လာ ချိန်မှာ “ဒီမှာကိုညီညီ ဒီသတ်ဖြတ် မှုတွေမှာ CS သံချောင်းမှားခဲ့တယ် ဆိုရင်တောင်စေတနာအမှားပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး အဲဒီတုန်း ကမန္တလေး တရုပ်တန်းဈေးကကျနော်.မိန်းမဆိုင်ရှေ.မှာ အော်ပြောတော့ ကျနော်တောင်ဆဲလွှတ် လိုက်သေးတယ်။
အဲဒီ မဒမ်သံခဲကပဲ ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကို ကျမ ကိုယ်တိုင်ခေါင်းဖြတ် ပါရစေ လို.သံချောင်း အီမ်ကို တက်ပြီးတောင်းဆိုတယ်ဆိုတာ အားလုံးပြောနေတဲ့ကိစ္စပါ။
March 17, 2012 at 4:20 am | Reply
CONTINUED: SOURCE: http://8-8-88.blogspot.com/2012/03/blog-post_15.html#more
(အဲဒီထွန်းအောင်ကျော်ရဲ.အစ်ကို ကိုချိုကြီးအီမ်မှာ မဒမ်သံခဲကိုမန္တလေး ထောက် လှမ်းရေး ၁ က လိုက် ဖမ်းနေချိန်မဒမ်သံခဲနဲနောက်တယောက် ၁၀ ရက်လောက်တိတ်တိတ်လေးအိပ်စားသွားပြီးကိုချိုကြီးကပဲတာဝန် ယူပြီး လွတ်မြောက်နယ်မြေကိုပို.ပေးခဲ့တာကိုမဒမ်သံခဲမေ့နေပုံရပါတယ်)။ နောက်တခုကအဲဒီလို ကိုယ်တိုင်ခုတ်ချင်ပါတယ်လို.ပြောလားလို ကျော်စွာဝင်းမောင်က ကျော်ခိုင်ဝင်းကိုမန္တလေးပွဲ မှာမေးတော့ အဲဒီတုန်းကတပ်က အမျိုးသမီးထဲကဒေါ်လိုင်ယောက်ပဲရှိတာ မေးမမေးတော့မသိဘူးလို.ဝေ့ လည်ကြောင်ပတ် ဖြေသွားပါတယ်။
ကျော်ခိုင်ဝင်းနဲ.တခြားစစ်ရုံးက စစ်ကြောရေးမှာပါဘူးတဲ့ ရဲဘော်ဟောင်းများခင်ဗျာ……
နှစ်ဖက်လှမလုပ်ကြပါနဲ.၊လူတကာသိတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောပြီးတာလောက်နဲ.တဘက်ကိုပြောင်းလာပြီဆိုပြီးမလုပ်ကြပါနဲ.။ ဒီဘက်ကိုတကယ်ပါချင်ရင် ဘယ်သူမှမသိတဲ့လျှို.ဝှက်ချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ကြပါ။
တစုံတဦးမထိခိုက်အောင်ဆိုပြီးနှစ်ဘက်လှလုပ်နေရင်မင်းတို.စစ်ကြောရေးမှာ ပါခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပြန်ပေါ်လာလီမ်.မယ်။ အခုတို. အင်္ဂံလန်ကအဖွဲ.တွေနဲ.ဆက်သွယ်ပြီးအမှုမှန်ပေါ်အောင်လုပ်မှာပါ။
နိုင်အောင်တို.၊အောင်နိုင်တို. ကိုကယ်မှာလား? စဉ်းစားပါ။ အရေးယူမယ်ဆိုရင်လဲချက်ချင်းကော်မတီဖွဲ.ပြီးစုံစမ်းရေးစလုပ်ပါ။
March 17, 2012 at 4:27 am | Reply
ညီညီ (မြောက်ပိုင်းရဲဘော်ဟောင်း) @ http://8-8-88.blogspot.com/2012/03/absdf_16.html#more
ကျနော်ကကျောင်းသားတပ်ကိုရောက်ပြီး၁၀ရက်လောက်မှာ တင်အဖမ်း ခံရတာပါ။ ရောက်ရောက်ချင်း ကျောင်းသားတပ်မှာအင်္ဂံလိပ်စကားပြော သင်တန်းဖွင့်တော့KIAထောက်လှမ်းရေးကအရာရှိဗိုလ်ဂွန် မော်(ယ္ခုဗိုလ်မှုးချုပ်ဂွန်မော်)နဲ.အတူအခြားတယောက်လဲပါလာတက်ပါတယ်။ ကျနော်အဖမ်းခံရတဲ့ညနေ မှာပဲဗိုလ်မှုးကြီးပန်းအောင်နဲ.ဗိုလ်ဂွန်မော်တို.ရောက်လာပြီးကျနော်ကို-KIAဘက်ခေါ်သွား ပြီးကျနော့်ကို KIAပြောင်း ဖို.ခေါ်ပါတယ်။ ကျနော်ကကျန်တဲ့အားလုံးထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကျနော့် အသက်နဲ.ရင်းပြီးအာမခံတယ်။အားလုံးကိုခေါ်ပေးပါ။ဖြေရှင်းပေးပါလို. ဆိုတော့ အဲဒီ DABမူကြီးကြောင့်မဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ကျနော်ထောင်ထဲထိပ်တုံးနဲ.နေစဉ်ဗိုလ်ဂွန်မော်နောက် ထပ်ရောက် လာပြီးထပ်ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကထိပ်တုံးထဲကကျနော်ဘေးမှာစိုးမိုးလဲရှိ ပါတယ်။ အဲဒီမှာလဲကျနော်က အားလုံးကိုခေါ်ပေးဖို.ပြောတော့အဲဒီ DAB မူကြီးကြောင့်ပဲ ဘာမှရှေ.မဆက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ချည်တဲ့သံကြိုးအပင်၅၀ကို တရုပ်ပြည် ကပန်းပဲဖိုမှာသွားမှာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကျားလေးကပဲ ၁၅ ခုတ်တဲ့အချိန်မှာကွန်မန်ဒိုတပ်စိတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင် အဖြစ်ပါခဲ့တာပါ။မခင်ချိုဦး ကိုမသတ်ခင် မတော် မတရား လုပ်ခဲ့ တာကျားလေးနဲ.အဖွဲ.ပါ။အခု ကျားလေးက မန္တလေးစက်မှုမြို.သစ် မှာလျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ဖွင့် ထားပြီး အခြေချနေပါတယ်။သန်းဇော် ကမန္တလေး သင်ပန်း ကုန်းမြို. သစ် မှာနေ ပါတယ်။ ဒါတွေကိုသိတဲ့လူတွေက ထပ်ဖော် ထုတ်ပေးကြ ပါ……
March 17, 2012 at 4:31 am | Reply
March 17, 2012 at 4:34 am | Reply
ရော်နယ်အောင်နိုင်ကို ပြောချင်တာက လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေး….
တစ်နေ့က ကိုရော်နယ်အောင်နိုင်ပြောတာလေး ဖတ်လိုက်ရပါတယ်၊ ဘာတဲ့ ”မေးမြန်းဖို့လိုအပ်ဖို့ခေါ်ရင်
သွားမှာပါ၊ ကျွန်တော်တို့ ဖုံးကွယ်ခဲ့တာ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းဥပဒေတွေနဲ့ လွှဲချော်ပြီးလုပ်ခဲ့တာ ဘာမှမရှိ ပါဘူး…” တဲ့။ ကိုရော်နယ်အောင်နိုင်ဆိုတာ ၁၉၉၂ ခုနှစ် ABSDF (မြောက်ပိုင်း) မှာ သတ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်နေ တဲ့ အချိန်က ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူ၊ သူ့အရင် ဥက္ကဋ္ဌက ကိုထွန်းအောင်ကျော်၊ ကိုထွန်းအောင်ကျော် ကို ထောက်လှမ်းရေးပါဆိုတဲ့ စွတ်စွဲ၊ဖမ်းဆီး၊ချုပ်နှောင်၊ နှိပ်စက်၊ညှင်းပမ်းထားပြီး လစ်လပ်တဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနေရာမှာ ဝင်ရောက်တာဝန်ယူနေတဲ့ ကိုရော်နယ်အောင်နိုင် ပါ။ ဖြစ်ကြ တာက လူ ၂ဝဝ ကျော်ရှိတဲ့ အဖွဲ့သားတွေထဲမှာ အဖွဲ့ သား ၁ဝဝ နီးပါးကို ထောက်လှမ်းရေးတွေပါဆိုပြီး ဖမ်းဆီးပါတယ်။ ပြီးတော့ သူလျှိုဟုတ် မဟုတ်ဆိုတာ ကို စစ်ဆေးပါတယ်။ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဖမ်းဆီးထားသူအားလုံး ကို ရက်ရက်စက်စက်နှိပ်စက် ရိုက်နှက်တယ်။ အချို့ကို စအိုထဲဝါးလုံးထည့်ပြီး မွေ့တယ်၊ ပြီးတော့မှ စအိုဝကို ကျဉ်စက်နဲ့ တို့တယ်။ ကသာက အားဆိုက်ဆို ရင် အတွင်း ထဲက ကလိစာတွေ ပုပ်ပြီး အသေဆိုးနဲ့ သေသွားရတယ်။
ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင် ထားချိန်မှာလည်း ညတိုင်းညတိုင်း အချုပ်ခံတွေအား လုံးကို လက်ပြန် ကြိုးတွေတုတ်၊ ခြေထောက်ကို ဒေါက်ခတ် ပြီး မျက်နှာကို အဝတ်မည်းစီးပြီးမှ အိပ်စေတယ်။ ဒါတင် မကသေး ပါဘူး။ အနှိပ်စက်ခံကျောင်းသားတွေကို ကက်ဆက် လိုလုပ်ပြီး သူတို့နားထောင်ချင်တဲ့အချိန် သီချင်းဆို ခိုင်း တယ်။ ဆိုခိုင်းပုံကလည်း ကက်ဆက်ဖွင့်ချင်တယ်ဆို ရင် ညာဘက်ပါးကို ရိုက်လိုက်တယ်။ ဒီတော့ မျက်နှာ အဝတ်စည်းခံထားရတဲ့ သူဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ညာဘက်ပါး ကို ဖြောင်းကနဲ အရိုက်ခံရပြီဆိုတာနဲ့ သီချင်းစ ဆိုပေ တော့၊ အိပ်ချင်တာတွေ၊ အိပ်နေတာတွေ၊ ဖျားနာတာတွေ မလိုဘူး။ စပြီး ဆိုပေရော့၊ အသံအတိုးအကျယ် ကို နား ပန်ဆွဲပြီး သတ်မှတ်ထားတယ်။ အဆိုကို ရပ်စေချင်ပြီ တော့ ဘယ်ဘက်ပါးကို အားကုန်ရိုက်ချ လိုက် တာပဲ။ အဲ ကျောင်းသားအချို့ကိုတော့ စစ်ဆေးနေရင်း လက်ဖြတ် ခြေဖြတ် ပစ်တယ်။ အဲဒီလိုဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း ဓားတွေ ဘာတွေနဲ့ ခုတ်ဖြတ်တာမျိုးအပြင် ယမ်းကပ် ပြီး မီးရှို့ဖြတ်တောက်တာမျိုးလည်း လုပ်ကြတယ်။ အချို့ တတွေများဆိုရင် ထောက်လှမ်းရေး ဟုတ်မဟုတ် စစ် လိုက်တာ တစ်ညထဲနဲ့ အသက်ထွက်သွားတဲ့သူတွေတောင် ရှိကြပါတယ်။ ဒီတော့ အဖမ်းခံ သူတွေ အားလုံး ဟာ ထောက်လှမ်းရေးတွေပါလို့ မရိုက်ခင်ကတည်းက ကြိုတင်ပြီး ဝန်ခံလိုက်ကြတယ်။ ဒါလည်းမရပါဘူး။ အနှိပ် စက်ကတော့ ခံရတာပါပဲ။ အဲဒီလို နှိပ်စက်ခံရတာတွေ ကလည်း တစ်ရက်တည်း တစ်ညတည်းမဟုတ်၊ အချို့ တတွေဆိုရင် ကိုးလ ဆယ်လ တစ်နှစ်အထိကြာခဲ့ကြရ တယ်။ နောက်တော့ ကျောင်း သားခေါင်းဆောင် ကိုထွန်းအောင်ကျော် အပါအဝင် ကျောင်းသား ၁၅ ယောက်ကို သတ်ပစ်ကြတယ်။ သတ်ပစ်ခံရတဲ့ ကျောင်းသားတွေ အားလုံးဟာ လက်ပြတ်၊ ခြေပြတ်တွေကြီးပဲ။ ဒါတောင် မသတ် ပဲ နှိပ်စက် ခံရမှုဝေဒနာတွေနဲ့ သေသွားတာတွေ ရှိသေးတယ်။ စုစုပေါင်းဆိုရင် ၃၈ ယောက်တောင်သေ တယ်လို့ ဆိုကြ တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အဖမ်းခံရတဲ့ ကျောင်းသား ၅၅ ယောက်ဟာ အချုပ်ခန်းဖောက်ပြီး ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်လာကြတယ်။ နောက်တော့ သူတို့ ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မျက်နှာငယ်ငယ်နဲ့ ဟုတ်နိုးနိုးအကြည့် စူးတွေအကြားမှာ နေခဲ့ရတယ်။ ခုအချိန်လွတ်လပ်ခွင့် တွေရလာပြီး အွန်လှိုင်းမီဒီယာတွေ ခေတ်စားလာမှ ရင်ဖွင့် ခွင့်ရကြရှာတာပါ။ ဒါတွေဟာ ဒီကနေ့အချိန်ထိမသေပဲ ပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေပါ။ သူတို့အများစုက ကလဲ့ စားချေလိုလို့ ရင်ဖွင့်ကြတာမျိုး မဟုတ်ကြပါဘူး။ သူတို့ ရဲ့ သန့်စင်ခဲ့တဲ့ ဘဝကို ပြချင်တာ၊ နောက်ပြီး တာဝန်ရှိ သူတွေရဲ့ မှားခဲ့မိပါတယ်ဆိုတဲ့ တောင်းပန်သံကို ကြား ချင်ကြတယ်။ အဲဒီလို အခြေအနေမှာ ကိုရော်နယ်အောင်နိုင် က ”ကျွန်တော်တို့ ဖုံးကွယ်ခဲ့တာ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း ဥပဒေတွေနဲ့ လွဲချော်ပြီးလုပ်ခဲ့တာ ဘာမှ မရှိပါဘူး…ဆို တော့ ကျွန်တော်အနေနဲ့ ကြားထဲက ငထွားနေရာ ဝင်ပြီး ခါးနာပြရပါတော့မယ်။
ကျွန်တော်ပြောချင်တာ ကိုရော်နယ်အောင်နိုင်တို့ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတွေ ဟာ ထောက် လှမ်း ရေးဖြစ်ခြင်း၊ မဖြစ်ခြင်းဆိုတာထက် လူသားတစ်ယောက် ဖြစ်တည်ခြင်းအကြောင်းပါ။ သူတို့ထဲက အချုိ့ဟာ ထောက် လှမ်းရေးဖြစ်နေခဲ့ရင်တောင် လူသားတစ်ဦးဖြစ်တာနဲ့ အညီလူသားတစ်ယောက်လိုပဲ ဆက်ဆံရမှာပါ။ အခြား အဖွဲ့တွေ ဟိုလိုလုပ်တယ်။ ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာ လက်ညိုးပြန်ထိုးဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့၊ သူတို့က သူတို့ပါ၊ ကိုအောင်နိုင်တို့ ဘာဖြစ်လို့ တော်လှန်ခဲ့တာပါလဲ။ လူ့အခွင့်အရေး အတွက် တော် လှန် ခဲ့တာပါ။ အဲဒီလို လူသားအားလုံးရဲ့ အခွင့်အရေးရရှိရေး ရရှိဖို့ တောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ ရန်သူ ကိုလည်း ရန်သူရဲ့ အခွင့်အရေးကို ပေးခဲ့ကြရမှာပါ။ ကိုယ့်နဲ့မတူ ကိုယ့်ရန်သူလိုသဘောထားပြီး ရက်စက်ခဲ့ တာဆိုရင်တော့ ကိုအောင်နိုင်ဟာ မိမိအတွက် အတ္တကြီး သော လူ့အခွင့်အရေးအရေခြုံသူတစ်ဦးလို့ပဲ သတ်မှတ် ရမှာ၊ ကိုအောင်နိုင်ကို တစ်ခုမေးချင်တာက ကိုအောင်နိုင် အနေနဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ချုပ်ထား တဲ့ အခန်းကို ရောက်ခဲ့တယ်လို့ ကျောင်းသားတွေက ပြောပြကြပါတယ်။ အဲဒီလို ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ကိုအောင်နိုင် ခြေပြတ်၊ လက်ပြတ်ကျောင်းသားတွေကို မမြင်ခဲ့ဘူးလား။ ဖြေနောင့် သံရိုက်ထား တဲ့ကျောင်းသားတွေ၊ ထိပ်ပေါက်ခေါင်းကွဲ သွေးသံတရဲရဲ ပြည်(ပြီ)တစိုစိုနဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ရော မတွေ့ခဲ့ဘူးလား။ မလိမ်ပါနဲ့ ကိုအောင်နိုင်.. တွေ့ဖူးခဲ့ မှာပါ။ ဒီလို မလုပ်ကြပါနဲ့ ကွာလို့ အဲဒီအချိန်က ကိုအောင် နိုင်ရဲ့ ရဲဘော်တွေကို ဟန့်ဖူးခဲ့ပါသလား။ အဲဒီတုန်းက အဲဒီလို မဟန့်ခဲ့တဲ့ ကိုအောင်နိုင်က အခုချိန်မှာ ”ကျွန်တော် တို့ ဖုံးကွယ်ခဲ့တာ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းဥပဒေတွေနဲ့ လွဲချော်ပြီး လုပ်ခဲ့တာ ဘာမှ မရှိပါဘူး…” ဆိုတော့ ရက်စက်တာ၊ နှိပ်စက်တာ၊ လက်ဖြတ်၊ ခြေဖြတ်တာ သတ်ဖြတ်တာတွေဟာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းဥပဒေတွေ နဲ့ အညီလုပ်ခဲ့တာ ဆိုတာမျိုး ဖြစ်သွားရပါတယ်။ ဒါဆို ရင် အိမ်စွန့်ယာစွန့် ပညာစွန့်ပြီး သေပွဲတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ အေဘီကျောင်းသားတပ်မတော်ကြီးဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လောကမှာ အများပြည်သူ နှာခေါင်းရှုံ့စရာအဖွဲ့ကြီး ဖြစ်သွားရရှာတော့မှာပေါ့ဗျာ။ ဒီတော့ဗျာ ကိုယ်လူရာ ဝင်ဖို့အရေး ဘာဘာညာညာတွေ တွေးပြီး မပြောလိုက် စမ်းပါနဲ့၊ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ယောက်ျားပီပီပြောထည့်လိုက်စမ်းပါ။
March 17, 2012 at 4:38 am | Reply
ဘယ်သူမှဘာသာမပြန်လို့ တတ်သလောက်ပြန်ပါတယ်။ အမှားတွေတပုံကြီးပါ။မတတ်နိုင်ပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်စာညံ့ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်သူအားလုံးမမေ့သင့်တဲ့သမိုင်းတခုမို့စာရေးသူကဗမာလို ရေးပေးနိုင် ရင်တော်တော်ကောင်းမှာပါ။
March 17, 2012 at 4:39 am | Reply
သေခြင်းတရားအကြောင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ရတာ ကျနော်တို့ ရဲ့ နေ့ စဉ်လုပ်ငန်းတခု။ အလုပ်လုပ်ရင်း နဲ့ သေခြင်းအကြောင်းစဉ်းစား။ ကိုယ်က အသတ်မခံရ လို့ ကျန်ရစ်ခဲ့တော့ အသတ်ခံရတဲ့သူတွေ အကြောင်း စဉ်းစား။ ဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားရင် လေညှင်း၊ဂီတ၊အချစ်၊အလှအပ…ဒါတွေ အားလုံးဘာတခုမှ ကျနော် စိတ်ထဲဝင်မလာ နိုင်တော့ ဘူး။ ကြင်နာမှု ၊စာနာမှုနဲ့ ဆင်ခြင်မှုတွေက ကျနော်တို့ အား လုံးအတွက်တော့ အဆိပ်တွေ။ But, you have to note here is, there is different between survival and fighting back together.
March 17, 2012 at 4:40 am | Reply
March 17, 2012 at 4:41 am | Reply
March 17, 2012 at 4:42 am | Reply
March 17, 2012 at 4:48 am | Reply
March 17, 2012 at 4:49 am | Reply
March 17, 2012 at 4:50 am | Reply
…သူတို့ ကခင်ဗျားကို နည်းနည်းအနားပေးလိမ့်မယ်။ နို့ မိုဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားကိုသေတဲ့အထိရိုက်သတ်လိမ့် မယ်။ ဒီကောင်တွေက ဒီစကားလုံးမျိုးတွေကို ကြိုက်တာသဲခြေခိုက်ပဲ။ ဒီစကားတွေကြားရင်သူတို့ကျေနပ် သွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ သူတို့ ဒေါသက ရူးသွပ်မှုကိုပြောင်းသွားတယ်။
March 17, 2012 at 4:51 am | Reply
March 17, 2012 at 4:52 am | Reply
March 17, 2012 at 4:53 am | Reply
March 17, 2012 at 4:55 am | Reply
ABSDF လူသတ်ပွဲဘယ်သူတရားခံလဲ အပိုင်း(၅)-နောက်ထပ်ဖော်ထုတ်ရအုံးမယ့်အမှုတွေ-ရေးသားသူ ညီညီ (မြောက်ပိုင်းရဲဘော်ဟောင်း)
အခန်း ၄ မှာတုန်းက ဆေးဆရာမတွေအကြောင်းကိုရေးခဲ့ပါတယ်။သူတို.နဲ.ပက်သက်ပြီးနဲနဲ ပြောစရာရှိပါသေးတယ်။ သူတို.ထဲကဆေးဆရာမ သိန်းဆွေ(တိန်.ဆွေ)နဲ.တင်စန်းဦးတို. နှစ်ယောက်ဟာ ပြည့်စိုးခိုင်သေသွားတော့အဲဒီသေတဲ့ I ရုံးထဲမှာ ခင်ချိုဦး(အသတ်ခံကျောင်း သူ) ကိုိ သေနေတဲ့ပြည်စိုးခိုင်ရဲ.မတော်ရာကို ( Oral Sex ) လုပ်ခိုင်းတဲ့အထဲမှာပါခဲ့တဲ့သူတွေ ပါ။(ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကအဲဒီနှစ်ဦးဟာအခုရန်ကုန်ရောက်နေပြီးကျနော်တို.ရဲဘော် ရဲဘက်ထဲကတဦး(အနှိပ်စက်ခံလွတ်မြောက်)ရဲ.အီမ်မှာဝင်ထွက်သွားလာနေကြတဲ့အထိရင်းနှီးနေ ကြတာပါ။ဒါကဘာကိုပြသလဲဆိုတော့ကျနော်တို.အထဲမှာကိုက ခင်မင်မှုအရဒီအမှုကြီးတ ကယ်ပြန်ပေါ်လာမှာကိုအားတပ်သရောမရှိကြသူတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာပြနေတာပါပဲ။ တချို.ကြတော့လဲကိုယ်တိုင်အဖမ်းမခံရခင်က ကျုးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေပြန်ပေါ်လာမှာ ကြောက်လို.လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အပေါ်မှာနာမည်ပါတဲ့ဆေးဆရာမနှစ်ဦးကတော့တရားစွဲခံရ မဲ့တရားခံစာရင်းထဲမှာသေချာပေါက်ပါမှာဖြစ်ပြီးအမှုအကြီးအသေးကတော့သူတို.ရဲ.ထွက်ဆို ချက်နဲ.ဘယ်လောက်ထိပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ဒါတွေက တော့တက်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ဥပဒေပညာရှင်များနဲ.နိုင်ငံတကာတရားသူကြီးတွေရဲ.အလုပ်ပါ။
ကွန်မန်ဒို(တိုက်ခိုက်ရေး)များနဲ.ပက်သက်ပြီး စစ်ကိုင်းတိုင်း ABSDF ဖြစ်မြောက်ရေးကိုဦးဆောင်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ကိုကျော်ကျော်အုန်း တို.ကိုလိုက်သတ်တဲ့ကိစ္စကိုနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ရေးသားပေးပါမယ်။
နောက်ထပ်ရေးချင်တာကကွန်မန်ဒိုထဲကအပြစ်လုပ်မထားတဲ့သူတွေအနေနဲ. မျိုးဝင်း နောက်ကျည်နဲ.သေတဲ့ပွဲမှာဘယ်သူတွေပါသွားသလဲ?အသက်ခံခဲ့ရတဲ့ဦးဝင်းကို ကိုလိုက်ပို.ခဲ့ တာဘယ်သူတွေလဲ?မျိုးဝင်း နောင်တောင်း ကိုဘာသွားလုပ်သလဲ၊?ရွှေလီမှာ ယွမ် ၁၁၀ တန် အခန်းမှာတည်းပြီးဘယ်သူတွေနဲ.တွေ.သလဲ?ဒါတွေကိုသိတဲ့လူတွေပြောကြပါ။နောက်တခါ အန်တီဒေါ်သောင်းလှအသတ်ခံရတဲ့ကိစ္စမှာတာဝန်ရှိသူတွေ၊နောက်ပိုင်းအမှုတွေဖြစ်တဲ့ ရင်ကျန်းဘေးကရှမ်းရွာမှာ ABSDF ကလက်နက်တွေအသီမ်းခံရတော့ ကျော်မြင့်ကထောင် အနှစ် ၂၀ ကျသွားတဲ့ကိစ္စမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စွတ်စွဲပြီး နောင်ရော်ပါ မှာခုတ်သတ်ခံခဲ့ ရတာဘယ်သူလဲ?သူ.ကိုခုတ်တဲ့ထဲမှာ အောင်ဆွေဦး ပါလား၊ ရင်ကျန်း က ခါဂျာမုန်.ရောင်းတဲ့ သူကိုခေါ်ခုတ်တာ ကျော်ကျော် လို.ပြောနေတာဟုတ်လား?မဟုတ်ရင်ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ ပြောရပါမယ်။ခင်ဗျားတို.သုံးနေတဲ့စကားပြန်သုံးရရင် “ နိဂုံးချုပ် “ ပါတော့မယ်။နောက်ကျတဲ့ သူက ကျနော်တို.ကို ပြည်သူတွေကိုပြောပြရတာမဟုတ်ပဲ တရားရုံးမှာတရားခံတွေအဖြစ် ထွက်ဆိုနေရတာဖြစ်နေပါလီမ့်မယ်။ သံချောင်း ကငြီမ်းချမ်းရေးလုပ်ဖို.ကြီုးစားချိန်မှာ သိုက်ထွန်းဦးဟာ ငြီမ်းချမ်းရေးကိုဖျက်ဖို.ကြီုးစားခဲ့ပါတယ်။သူက ၅၀၁ ရင်းမှုးဆိုတော့ ၅၀၁ က မောင်ဦးကိုသုံးပြီး ဗန်းမော်ဗျုဟာက တပ်မတော်ဗျုဟာမှုးကိုလုပ်ကြံဖို. မောင်ဦးကို ခိုင်းရာမှာ KIA ကဖော်ထုတ်ဟန်.တားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သိုက်ထွန်းဦးဟာဒီလိုတက်ကြွတဲ့အလုပ် တွေကိုလုပ်ခဲ့သူပါ။သူနောက်ထပ်ဘာပြစ်မှုတွေလုပ်ခဲ့သေးလဲ?သိသူများဖော်ထုတ်ပေးကြပါ။ လွိုင်ဇာ ကအေးချမ်းမေ ခေါက်ဆွဲဆိုင်မှာ သိုက်ထွန်းဦး၊အောင်ဆွေဦး၊သန်းဇော်တို.နဲ.တွေ တော့ဘီယာတိုက်ခိုင်းလို.တိုက်ရင်း ကျနော်ဟာထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ.၊ ထွန်းအောင်ကျော်နဲ.ကိုချိုကြီးတို.လဲထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဖွင့်ပြောခဲ့ဘူး ပါတယ်။အဲဒီလိုပဲ ပထမ အခေါက်အဖမ်းခံရအပြီး KIA ကပြန်အရောက် ဒုတိယအခေါက် အဖမ်းမခံရခင် သံချောင်းနဲ.စကားပြောရင်း “ဖမ်းမိတဲ့တရားခံတွေကို ဗီဒီယိုရိုက်၊စစ်ချက်ယူပြီး မီဒီယာတွေနဲ.တွေဆုံပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ် နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်ပြီး ဖမ်းထားတဲ့သူတွေ ကိုပြန်လွတ်ဖို. အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။(အဲဒီနေ.ညက ညီညီကျော် တယောက်ထဲထွက်ပြေးတဲ့ညပါ ထောက်လှမ်းရေးတွေကိုသတ်ရင်ကျောင်းသားလက်တွေသွေးစွန်းမယ် ၊သွေးမစွန်းစေပဲ နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်ဖို.ပြောရာမှာ သံချောင်းက လက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တရက်မှာ ပယ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။နောက်တခါ ကျနော်တို.ထဲက ၅၅ ယောက်ထွက်ပြေးအပြီး ကျနော်တို. အကျယ်ချုပ်ဖြစ်နေချိန်မှာ သံချောင်းကိုဖျောင်းဖြပြီး ဒီထဲမှာအမှားပါခဲ့တယ်ဆိုတာ ၀န်ခံခိုင်းဖို. လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ “C S ကျနော်ကတော့ထောက်လှမ်းရေးက ဗိုလ်အစစ်ပါ။ဒါပေမဲ့ လူတွေ ၁၀၀ ကျော်မှာ တချို.များမှားနေမလားလို.ကျနော်အရာရှိတဦးအနေနဲ.သံသယ ရှိမိပါတယ်။အနာဂတ် နိုင်ငံရေးမှာ CS နဲ. ဥက္ကဌ က ကျနော်တို.ကိုဦးဆောင်ရမှာ၊အဲဒိအမှားတွေရှိခဲ့ရင် ဒီဂယက်တွေကိုခင်ဗျားတို. ၂ ယောက်ပဲခံရမှာ၊ဒီတော့ ဒီဖမ်းဆီးမှုတွေမှာအမှားအယွင်းတွေရှိခဲ့ တယ် အဲဒါတွေကို VCS လုပ်ခဲ့တာပါဆိုပြီးပုံချလိုက်ပါ”ဆိုတော့သံချောင်းကလက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့နောက်ရက်မှာအောင်နိုင်ရောက်လာပြီးABSDFဘယ်တော့မှမမှားဘူးဖမ်းတဲ့အထဲမှာမှားတာတယောက်ပါရင်ကိုယ့်သာသာကိုယ်ကြိုးစင်တက်မယ်လို.ပြောပါတယ်။။ပြီးတော့ ကျနော်.ကို မင်းဒီစကားပြောတာထောက်လှမ်းရေးအလုပ်လုပ်တာပဲ၊သွေးခွဲတာပဲ၊နောက်တခါ ပြောရင်မင်းကိုတခါတည်းသတ်ပြစ်မယ်လို.ကြီမ်းပါတယ်။
ဆက်လက်ရေးသားတင်ဆက်ပေးပါမည်။ — Baydar Lam postedaphoto to your Wall.